ခဈြစရာကောငျးပွီး စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ လသာဆောငျကလေးတှေ ဖနျတီးပွငျဆငျကွမယျ…. - Home Decoration | iMyanmarHouse.com
5 Jul 2020 3:02 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
729 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ညနခေငျးဆညျးဆာနဝေငျခြိနျတှေ၊ ညဘကျအလငျးရောငျပြောကျ တဲ့ အခြိနျမြိုးတှဆေိုရငျ အိမျရှဝေ့ရနျတာ၊ လသာဆောငျ လေး တှမှော ငွိမျငွိမျကလေးထိုငျကာ ကောငျးကငျက လရောငျနဲ့ ကွယျ ပှငျ့လေး တှမေော့ကွညျ့ပွီးတော့အတှေးစိတျကူးလေးတှယေဉျပွီးတော့ ကွညျနူးရတဲ့အခိုကျအတနျ့လေးတှေ ရှိဖူးကွမှာပါ။
ဒီလိုကိုယျ့ ရဲ့ကိုယျပိုငျစိတျကွိုကျအခြိနျကလေးမှာ တကယျ့ကိုပြျောစရာ ကောငျးတဲ့ စိတျကူးအတှေးကလေးတှထေဲမှာပဲ စီးမြောရငျး ကုနျဆုံးရတဲ့အရသာက တကယျ့ကိုခံစားလို့ ကောငျးတဲ့အခြိနျ ကလေးတဈခုပဲ ဖွဈမှာပါ။
ဒီလိုလသာဆောငျ၊ နားနတေဲ့နရောလေး တညျဆောကျဖို့အတှကျ စိတျကူးကောငျးကောငျးနဲ့ ဆနျးပွားတဲ့ ဒီဇိုငျးအပွငျအဆငျလေးတှေ နဲ့ ခဈြစရာကောငျးအောငျတညျဆောကျထားမယျဆိုရငျ တကယျ့ကိုပဲ သငျ့ရဲ့စိတျကိုဆှဲဆောငျစမှောပါ။
လူတဈယောကျနှဈယောကျစာ နရောကလေးကနေ ကိုယျ့ရဲ့ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကိုယျပိုငျသီးသနျ့ ကမ်ဘာငယျလေးတဈခု ဖွဈသှားအောငျ ပွငျဆငျတတျဖို့ အပွငျအဆငျ နညျးလမျးလမျးကောငျးလေးတှေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ စားပှဲထိုငျခုံလေးတှကေို နရောကောငျးကောငျးခတြတျဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျ့အိမျရဲ့လသာဆောငျအဖွဈထားရှိထားတဲ့ နရောလေး နဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ စားပှဲ၊ ဆိုဖာခုံလေးတှေ ထညျ့သှငျးပွငျဆငျပါ။
ဝရနျတာလညျး ဖွဈနိုငျသလို၊ အမိုးလှတျအခနျငယျလေးလညျး ဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ဒီနရောမှာ ဘယျလိုပစ်စညျးလေးတှေ ထားရှိမလဲဆိုတာ ကို ပွငျဆငျပွီး စနဈတကနြဲ့စှဲဆောငျမှုရှိရှိ ပွငျဆငျထားရှိပါ။ အေးဆေးတညျငွိမျပွီး စိတျအေးလကျအေးနားယူလို့ ရနိုငျမယျ့ အခနျး၊ လသာဆောငျ နရောအဖွဈထားရှိပါ။
၂။ အလှဆငျပစ်စညျးလေးတှေ ထညျ့သှငျးပွငျဆငျပါ။ ရောငျစုံပနျး ပငျလေးတှေ၊ စိမျးစိုနတေဲ့ အပငျလေးတှေ၊ အလှဆငျပစ်စညျးလေး တှေ၊ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခေါငျးအုံးလေးတှေ၊ ခုံလေးတှေ၊ စသဖွငျ့ ပွငျဆငျပါ။ ခဈြစရာကောငျးပွီး ရောငျစုံထိုငျခုံလေးတှေ၊ ကျောဖီစားပှဲလေးတှကေ တကယျ့ကိုထူးခွားပွီး လှပပါတယျ။
၃။ ပနျးပငျလေးတှေ စိုကျပြိုးပါ။ ရောငျစုံဖူးပှငျ့နတေဲ့ ပနျးပငျကလေးတှေ၊ ပနျးအိုးကလေးတှေ လသာဆောငျမှာ စိုကျပြိုးထားပါ။ ပနျးပငျ လေးတှစေိုကျပြိုးခွငျးက အလှယျကူဆုံး အိမျအလှပွငျဆငျခွငျးနညျးလမျးပါပဲ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပနျးအိုး၊ ပနျးဆိုငျးကလေးတှေ၊ ပနျးပှငျ့ကလေးတှကေ သငျ့ကို တကယျစှဲဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ ဆေးရောငျလှလှကလေးတှေ၊ ကွမျးခငျးလှလှကလေးတှေ ခငျးကငျြးပါ။ ကိုယျ့ရဲ့လသာဆောငျကလေးနဲ့လိုကျဖကျညီမှုရှိတဲ့ ဆေးရောငျလှလှကလေးတှပွေငျဆငျသုတျခွယျပါ။တညျငွိမျပွီးမကျြစိအေးတဲ့ ဆေးရောငျကလေးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ နှေးနှေးထှေး ထှေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဆေးရောငျစုံကလေးတှေ၊ နောကျစှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အရောငျတောကျတောကျကလေးတှေ စသဖွငျ့နဲ့ ကွညျ့ကောငျးပွီးလိုကျဖကျတဲ့ ဆေးရောငျကလေးတှကေလညျး လသာဆောငျလေးရဲ့ အလှကိုပံ့ပိုးပေးနိုငျပါတယျ။
ချစ်စရာကောင်းပြီး စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လသာဆောင်ကလေးတွေ ဖန်တီးပြင်ဆင်ကြမယ်….
ညနေခင်းဆည်းဆာနေဝင်ချိန်တွေ၊ ညဘက်အလင်းရောင်ပျောက် တဲ့ အချိန်မျိုးတွေဆိုရင် အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ၊ လသာဆောင် လေး တွေမှာ ငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်ကာ ကောင်းကင်က လရောင်နဲ့ ကြယ် ပွင့်လေး တွေမော့ကြည့်ပြီးတော့အတွေးစိတ်ကူးလေးတွေယဉ်ပြီးတော့ ကြည်နူးရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေ ရှိဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုကိုယ့် ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အချိန်ကလေးမှာ တကယ့်ကိုပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးအတွေးကလေးတွေထဲမှာပဲ စီးမျောရင်း ကုန်ဆုံးရတဲ့အရသာက တကယ့်ကိုခံစားလို့ ကောင်းတဲ့အချိန် ကလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီလိုလသာဆောင်၊ နားနေတဲ့နေရာလေး တည်ဆောက်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်လေးတွေ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင်တည်ဆောက်ထားမယ်ဆိုရင် တကယ့်ကိုပဲ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်စေမှာပါ။
လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်စာ နေရာကလေးကနေ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် ကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခု ဖြစ်သွားအောင် ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ အပြင်အဆင် နည်းလမ်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ စားပွဲထိုင်ခုံလေးတွေကို နေရာကောင်းကောင်းချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ရဲ့လသာဆောင်အဖြစ်ထားရှိထားတဲ့ နေရာလေး နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ စားပွဲ၊ ဆိုဖာခုံလေးတွေ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပါ။
ဝရန်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ အမိုးလွတ်အခန်ငယ်လေးလည်း ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုပစ္စည်းလေးတွေ ထားရှိမလဲဆိုတာ ကို ပြင်ဆင်ပြီး စနစ်တကျနဲ့စွဲဆောင်မှုရှိရှိ ပြင်ဆင်ထားရှိပါ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး စိတ်အေးလက်အေးနားယူလို့ ရနိုင်မယ့် အခန်း၊ လသာဆောင် နေရာအဖြစ်ထားရှိပါ။
၂။ အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပါ။ ရောင်စုံပန်း ပင်လေးတွေ၊ စိမ်းစိုနေတဲ့ အပင်လေးတွေ၊ အလှဆင်ပစ္စည်းလေး တွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခေါင်းအုံးလေးတွေ၊ ခုံလေးတွေ၊ စသဖြင့် ပြင်ဆင်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရောင်စုံထိုင်ခုံလေးတွေ၊ ကော်ဖီစားပွဲလေးတွေက တကယ့်ကိုထူးခြားပြီး လှပပါတယ်။
၃။ ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးပါ။ ရောင်စုံဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းပင်ကလေးတွေ၊ ပန်းအိုးကလေးတွေ လသာဆောင်မှာ စိုက်ပျိုးထားပါ။ ပန်းပင် လေးတွေစိုက်ပျိုးခြင်းက အလွယ်ကူဆုံး အိမ်အလှပြင်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းအိုး၊ ပန်းဆိုင်းကလေးတွေ၊ ပန်းပွင့်ကလေးတွေက သင့်ကို တကယ်စွဲဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဆေးရောင်လှလှကလေးတွေ၊ ကြမ်းခင်းလှလှကလေးတွေ ခင်းကျင်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့လသာဆောင်ကလေးနဲ့လိုက်ဖက်ညီမှုရှိတဲ့ ဆေးရောင်လှလှကလေးတွေပြင်ဆင်သုတ်ခြယ်ပါ။တည်ငြိမ်ပြီးမျက်စိအေးတဲ့ ဆေးရောင်ကလေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် နွေးနွေးထွေး ထွေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆေးရောင်စုံကလေးတွေ၊ နောက်စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရောင်တောက်တောက်ကလေးတွေ စသဖြင့်နဲ့ ကြည့်ကောင်းပြီးလိုက်ဖက်တဲ့ ဆေးရောင်ကလေးတွေကလည်း လသာဆောင်လေးရဲ့ အလှကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗိုလျတဈထောငျ Time Square Condo တှငျ...
၇နှဈလှာတိုကျက ၆လှာလေး တမိုးအောကျ
သာကတေ၊ ၇ ရပျကှကျ ၊ အောငျသပွအေရှေ့ (...
ရှပွေညျသာ ၆ရပျကှကျ VIP ရပျကှကျသနျ့...